Gadzira fekitori uye oem / yakagadzirirwa cosmetics mugadziri | Baniffee Makeup
Banffee Makeup - Professional Make Up Factory& Customized Cosmetics Mugadziri
Chiso Chakatarisana Zvigadzirwa
Nzvimbo Yakadzika & Bronzer
Kusunungura kuisa poda
Miromo inogadzira zvigadzirwa
NON STATLE LIP Gloss
Maziso anogadzira zvigadzirwa
MIRA UYE NAKIDZWA runako rwako
Regai Banffee Makeup rwakapararira wose pakona Of The World! Isu tiri nyanzvi OEM & ODM zvizoro Manufacturer.
Banffee Makeup chinhu nyanzvivanoumba fekitari uye zvizorwa zvinogadzirwa mugadziri mu China nokuda ose nameso zvizoro, chiso zvizoro uye muromo zvizoro. Our chikuru zvigadzirwa zvinosanganisira lipstick, eyeshadow palettes, eyeliners, hwaro, chakatsikirirwa upfu, Highlighter& bronzer, etc.
Banffee Makeup ndiye Wholesale zvizoro vagadziri kuti vane zvedu muchiso muzvizoro kuti Wholesale uye anopa OEM / ODM basa.
Isu tiri nyanzvi OEM& ODM cheno mugadziri, Izvo rinovira Research and Development, kugadzirwa uye rokutengesa mune mumwe. Tine mukurumbira wakanaka yedu yemhando zvokushandisa, nyanzvi okutengesa chikwata, simba R& D chikwata kwemakore anopfuura 10, kugoverwa mbishi zvokuvakisa rose. Banffee Makeup rinopa nyanzvi tsika serivce nokuda ose zvizoro zvigadzirwa. Kana uri kutsvaka zvizoro OEM mugadziri, nesu.
Inquiry:Vatengi kuudza kutsvakwa chimiro chinhu, kuita nokurondedzerwa, upenyu akangofanana, uye abvume zvinodiwa.
kugadzira: Magadzirirwo chikwata rinobatanidzwa kubvira pakutanga chirongwa kuitira zvakanaka tsika yakagadzirwa zvigadzirwa kuti suit vatengi 'zvinodiwa.
Quality Management: Kuti kupa yepamusoro zvivako, isu tiine inobudirira& vakarongeka Quality Management System.
Banffee Makeup inopa chimwe-kumira negadziriso kutanga-up masikirwo pezvitsiga: zvinopa azere dzino customization mabasa akadai muchiso design, chigadzirwa kavha design, muchiso musika boka Positioning pachisara chigadzirwa kukura uye kugadzirwa, chigadzirwa okutengesa kudzidzisa, etc.
Somunhu vanoumba fekitari / mugadziri kwemakore 16 ruzivo, Banffee Makeup anokwanisa kupa yepamusoro zvizoro panguva zvemakwikwi mutengo.
makore 16 Zvakaitika
The zvigadzirwa havasi chete vakafarirwa mudzimba vatengi, asiwo aivigirwa kuna Southeast Asia, Middle East, Africa, Ea ...
Tine mukurumbira wakanaka yedu yemhando zvokushandisa, nyanzvi okutengesa chikwata.
Banffee rinogona customized wevacheche, customized Mabhokisi, vakasununguka design, kutumirwa basa uyewo pashure-okutengesa servic ...
utsinye vakasununguka& kueche
roduct dzakatevedzana zvinosanganisira eyeshadow, lipstick, lipgloss, nomuromo nebharisami, tsiye, eyeliner, naamio, hwaro, Highlighter, c ...
Guangzhou Banffee zvizorwa Co., Ltd. hwakagadzwa muna 2015. Headquarter Its uye R&D garo dziri muna Jianggao Town Industrial Park, Baiyun District, Guangzhou City, iyo ine tsika ezvinhu akapfuma. Chinangwa boka riri kukura, magadzirirwo, kugadzira, rokutengesa uye kugoverwa pachiremera yepamusorosoro zvizoro, munhu revatema vanoumba fekitari uye customized zvizoro mugadziri.
Pashure pemakore 7 kukura, Banffee Makeup aita ISO22716, GMP, SGS, FDA certifications, uye ane pachake hwokugadzira tsvakurudzo uye kukura chikwata, pamwero mukuru GMPC kugadzirwa workshop, ano kugadzirwa midziyo zvizere automatic, uye munyika dzakawanda zvitengeswa ngetani importing mbishi zvinhu. Zvino rava kuzivikanwa masikirwo zvigadzirwa kambani iri zvizoro indasitiri, buda yayo muchiso KILLFE. Kana uri kutsvaka nyanzvi uye yakavimbika anoumba fekitari / OEM zvizoro vagadziri, anobvumirwa nesu.
Makore 16 ruzivo zvizorwa nharaunda.
Rukasimbiswa kushamwaridzana certifications zhinji.
Mumwe-vanorega basa makasitoma edu.
Hedzinoi nhau pamusoro kambani yedu uye indasitiri. Verenga namagwatidziro izvi kuti vawane mamwe mashoko pamusoro zvigadzirwa uye bhizimisi uye nokudaro kuwana kunyorwa ramunoda. Tinotenda zvakasimba kuti tinofanira kudzidza kuti ganda zvakanaka-achidzidziswa anogona kuzadzisa zvinhu zvakawanda waita kumbobvira unogona kuzadzisa.
Top Holiday Eyeshadow Palettes pa Banffee Makeup
The zvinoshamisa-siyana yezororo eyeshadow palettes pa Banffee. Kunze Vakamupfekedza mavara uye noruvara, pane dzakawanda ...
Banffee itsva chigadzirwa
--Following chikuru ganda kutarisirwa zvigadzirwa, Banffee akatanga multi-chiito chawo womuchero zvigadzirwa richikura huripo chigadzirwa mutsetse ...
Clear Lip Liner - Kuramba Your Lipstick sanganisika All Day
Kufanana ose maumbirwe chigadzirwa, akajeka muromo liners vari kuita upenyu nyore. Kunobatsirei uye sei kudzivisa smudgi ...
Zvakanakira Natural Lip Gloss uye sei Select Best Natural Lip Gloss
#Best zvakasikwa muromo glosses ndiwo mushonga Chapped uye ruchitsemuka miromo yevanhu chaivo. Click kuziva sei zvinobatsira ...
Where kuti Isa Highlighter pamusoro Face?
Danho nedanho iri kupi kuisa Highlighter pachiso uye kushandisa Highlighter kunatsiridza huma yako, pamatama, uye mhino ...
Ndeupi Lipstick ndiye Best kuti Daily Use?
Hey, ngatigarei kuramba vachikurukurirana!
Kana muine mibvunzo pamusoro zvinhu zvedu kana mabasa,
inzwa wakasununguka kutaura chikwata vatengi.
Sei We Azvo Meet And Unorondedzera Global
Chinhu chokutanga chatinofanira kuita rokusongana edu vatengi uye nehurukuro kuburikidza zvinangwa zvavo rimwe basa ramangwana.
Pamusangano uyu, sununguka kutaura pfungwa dzako uye bvunza yakawanda mibvunzo.
Guangzhou Banffee Cosmetics Co., Ltd. yakavambwa muna 2015. Isu tinotarisa pakuvandudza, dhizaini, kugadzira, kutengesa uye kugovera cheni yemhando yepamusoro-tekinoroji cosmetics.
INZWA WAkasununguka KUTIBATA
Kero: Kamuri 307, Kuvaka 4, Nhamba 4, Greenland Airport Center, Huadu District, Guangzhou